Maitiro ekugadzira iPad mavara akashinga | IPhone nhau
Maitiro ekugadzira iyo mavara eIpad akashinga
Apple yagara ichizivikanwa nekugadzira ekushandisa-ari nyore kushandisa uye nekuda kweizvi inoisa sisitimu huru pane iyo sisitimu yekushandira iyo yainogadzira yega uye yega yega zvishandiso, kunyangwe ari madhesiki, malaptop kana nhare mbozha dzakadai seIpad, iPhone kana iPod. Bata. Kunyangwe iri paOS X kana iOS, ese ari maviri masystem anoshanda ane sarudzo dzekuvandudza kuwanikwa kwevanhu vane kutadza kuona kana kunzwa. Asi panguva ino ticha tsanangura kuti tingaisa sei tsamba inoratidzwa pane chishongedzo.
Bold font pane iPad
Chekutanga pane zvese isu tinofanira kuenda Zvirongwa, apo isu tichienderera chero patinenge tichida kugadzirisa chero paramende yekumisikidza kwechigadzirwa chedu.
Tevere tichaenda kuchikamu General.
Mukati meGeneral, mubato rechitatu resarudzo, tinobaya pane Accessibility kuvhura menyu uko iwe kwaunogona kuwana zvingasarudzika zveasingaone kana kuoma kwekunzwa.
Muchikamu chechipiri chesarudzo chatinowana munzvimbo yechipiri Bold zvinyorwa ine tebhu kuti ikwanise. Kana tango gonesa sarudzo, iyo iPad inotimanikidza kuti titangezve iyo iPad kuti shanduko dziitwe.
Kana kese mudziyo watangwazve, isu tichaongorora nekuvhura akasiyana maficha kuti mavara ese (kunze kwemifananidzo) anoratidzwa zvakashinga, kuwedzera musiyano neshure kuitira kuti vanhu vane matambudziko ekuona vagone kushandisa chishandiso nenzira iri nyore kwazvo uye pasina kuita nhanho yekuona zvinyorwa zvemukati zvarinotiratidza.
Kana paine shanduko iyi, vanhu vane matambudziko ekuona vanoenderera mberi kuti vasanyatsoona iwo mavara akaratidzwa pachiratidziri, imwe sarudzo inowanikwa paIOS ndeyekuwedzera saizi yefonti izvo zvinoratidza. Iyi sarudzo inoratidzwa pamberi peBold Text.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira iyo mavara eIpad akashinga
Aya ndiwo maitiro ekuwana yekuongorora chiteshi cheApple Watch
Iyi ndiyo yekutanga mifananidzo yeiyo iPhone 6s?